Madagasikara, satria - EDBM - Economic Development Board of Madagascar
1. Fahafahana miditra amin’ny tsena iraisam-pirenena manana mpanjifa miisa 600 tapitrisa
Fahafahana miditra amin’ny tsena iraisam-pirenena manana mpanjifa miisa 600 tapitrisa mahery monina amin’ny firenena afrikanina 34
2. Fepetram-padintseranana manokana manamora ny fidirana amin’ny tsena
Fepetram-padintseranana manokana manamora ny fidirana amin’ny tsena Eoropeana sy any Etazonia
3. Fahafahana mampiasa vola any amin’ireo faritra tsara ho trandrahana
Ny fahafahan’i Madagasikara hofidiana amin'ny “Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique Lalànan’ny fampandrosoana sy ny fahazoana manararaotra ao Afrika (AGOA) amin'ny fiaraha-miasa amin’i Etazonia sy ny fanasoniavana ny Fifanaraham-piaraha-miasa ara-toekarena (EPA) amin'ny Vondrona Eoropeana no ahafahan’ireo orinasa ato amin’ny firenena mhanondrana entana mankany amin’ireo tsena ireo tsy mila fandoavana haba amin’ny fanditseranana. Hita taratra amin'ny fivoaran'ny varotra eo amin'i Madagasikara sy ny firenena roa tonta izany, nitombo 12,8% ny fanondranana entana nataon’i Madagasikara mankany Etazonia tamin’ny taona 2016 ary nitombo 44,6 % ny nankany amin’ny Vondrona Eoropeana tamin’ny taona 2016.
4. Saram-pandaniana mora kokoa
Manana tombondahiny maro eo amin’ny fifaninanana i Madagasikara, anisan'izany ny vidin’ny asa mila tànana (50 dolara amerikana isam-bolana), ny vidin'ny herinaratra (0,166 dolara amerikana/kWh tamin'ny taona 2016) sy ny rano (0,30 dolara amerikana/m3 tamin'ny taona 2016). Amin’ny fandaniana indostrialy, (2,00 dolara amerikana/m² isam-bolana) ny saram-panofana toerana indostrialy, ny fisian’ny fitaovana "voajanahary" sy akora amin'ny vidiny mora, ny fanamoràna ny fitrandrahana ireo loharanon-karena (ohatra : ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany an-tafo lanitra, ny fepetra voajanahary hanaovana fambolena sy fotodrafitr'asa) sns. Ankoatra izany, azon’ny mpampiasa vola araraotina ny sandan'ny fifandraisana aterineto, izay mitàna ny laharana faharoa amin'ny halakin’ny fifandraisana eto Afrika
5. Ny lalàna sy ny hetra amin’ny fampiasam-bola
Manao fanavaozana lehibe amin’ny lalàna, amin’ny fombafomba arahina sy ny taratasy ara-panjakana i Madagasikara mba hanamorana ny fomba fanao ara-barotra sy handrisihana ny fampiasam-bola eto an-toerana sy avy any ivelany. Nanomboka tamin’ny taona 2016, fanavaozana mihoatra ny 20 no nampiharina teo amin'ny sehatry ny lalànan’ny fihariana, ny fitsarana ara-barotra, ny fanondranana sy ny fanafarana entana, ny fananganana orinasa, ny fanamorana ny fampisamboram-bola, ny hetra, sns. Lalàna maro manome vahana ny fampiasam-bola, indrindra indrindra ny lalànan’ny Orinasa Afakaba no navoaka ampahibemaso, ahafahan'ireo fikambanam-barotra tsy mandoa haban-tseranana sy hetra (TVA) amin’ny fanafarana entana avy any ivelany; sy tsy fandoavan-ketra amin’ny vola miditra mandritra ny 15 taona voalohany.
6. Fampanantenan’ny governemanta malagasy amin’ny tetikasa ara-drafitra
Ankoatra ireo zava-bita madiodio, dia miantehitra amin'ny fiarahan’ny fanjakana sy ny tsy miankina miasa ny governemanta malagasy. Tetikasam-potodrafitr'asa maro no notanterahina teo amin’ny sehatry ny fifandraisan-davitra, tahaka ny fametrahana hosina tsora-bera mirefy 12.000 km mahery, sy tambazotra hertziennes mirefy 14.000 km mahery. Ahitana tetikasa maromaro hananganana foiben-drano mpamokatra herinaratra ny sehatry ny angovo, ka anisan'izany ny 500 tapitrisa dolara nampiasaina tao Volobe, izay mamokatra 110 MW. Ny dingana manaraka amin'ny fananganana faritra ara-toekarena manokana, izay natokana ho an’ny indostrian'ny fanenonan-damba (faritra indostrialy mihoatra ny 100ha) no hampiroborobo ny fananganana fotodrafitrasa ilaina amin'ny fisongadinan’ireo tendrom-pitomboana.
7. Nosy feno harena voajanahary
Manana harena an-kibon'ny tany, fambolena, angovo, jono azo trandrahana i Madagasikara. Tombony amin’ny fampiasam-bola ara-pizahan-tany ihany koa ny maha-tsy manam-paharoa ny tontolo voajanahariny (90%, laharana voalohany eto Afrika, ny tahan'ny harenan'ny tontolo voajanahary ary manana ny taham-piavahana andemika ambony indrindra maneran-tany).